एक वर्षसम्म तयारी नगर्दा नेपालमा कोरोनाले पुनः भयाभह अवस्था आउदैछ ? - Vishwanews.com
एक वर्षसम्म तयारी नगर्दा नेपालमा कोरोनाले पुनः भयाभह अवस्था आउदैछ ?
काठमाडौं । ११ चैत २०७६ मा पहिलो पटक लकडाउन गरेको नेपालले कोरोना भाइरसको पहिलो लहरको चरम रुप भने असोज, कात्तिकमा सामना गर्यो । त्यसपछि क्रमशः कम हुँदै गएको कोरोना फागुन, चैतमा पुग्दा करीव शुन्य प्राय अवस्थामा थियो । तर, त्यसपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण दरले पुनः गति लिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आंकडा अनुसार बिहीबारसम्म देशभर १२ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पुगिसकेका छन् । दैनिक २५ सय हाराहारी नयाँ संक्रमण पुष्टी भइरहेको छ । यसले छिट्टै विकराल रुप लिने र मुलुकमा स्वास्थ्य संकट देखिन सक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिइरहेका छन् । सरकारले एक वर्षको अवधि खेर फाल्दा पुनः भयाभह अवस्था आउन सक्ने देखिएको हो ।
सरकारले कोरोना भाइरसको वेव कम भएको अवस्थामा पूर्वाधारमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेन । त्यसको साटो प्रधानमन्त्रीले सत्ताका लागि संसद विघटनदेखि आफ्नै अगुवाईमा ठूल्ठूला र्याली सम्म गर्न भ्याए । दुई दिन अगाडी सितारामको मूर्ति माडीमा राख्ने प्रधानमन्त्रीकै रहर पुरा गर्न हजारौंको सहभागितामा भब्य कार्यक्रम आयोजना गरियो । यसले कोरोना संक्रमण बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १२ हजार ६९० पुगेको छ । क्वारेन्टाइनमा ८१ जना रहेका छन् । विहीबारसम्म देशभरका विभिन्न अस्पतालका आईसीयूमा १७० र भेन्टिलेटरमा ५९ जना उपचाररत छन् । नेपालमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन हजार ११७ पुगेको छ ।